शिक्षा Archives - Page 14 of 21 - Dna Nepal
बलात्कार र हत्या विरुद्ध पाेखरामा विद्यार्थीको प्रदर्शन–’महिला सुरक्षा ज्ञारेण्टी गर !’ (भिडियो) ११ आश्विन २०७५, बिहीबार ०८:५५
पोखरा, असोज ११ । देशभरी महिला हिंसा र बलात्कार तथा हत्याका घटना प्रतिदिन बढ्न थालेपछि पोखराका साना विद्यार्थीहरु पनि आन्दोलनमा होमिएका छन् । महिला हिंसा विरुद्धको आन्दोलनमा उनीहरुले विहिबार पोखरामा जुलुस नै निकाले । विद्यार्थीहरुले महिला..
पिएन क्याम्पसमा विद्यार्थीको आन्दोलन ८ आश्विन २०७५, सोमबार ०८:२६
पोखरा, असोज ८ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका स्नातकोत्तर बिद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा अत्यधिक शुल्क लिएको भन्दै शुक्रबार विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका..
पोखराको जनप्रिय क्याम्पसमा कुटपिटबाट दुई विद्यार्थी घाईते ४ आश्विन २०७५, बिहीबार ११:०२
पोखरा, असोज ४ । पोखराको जनप्रिय क्याम्पस अगाडी अपिरिचत ब्यक्तिको कुटाईबाट दुई विद्यार्थी घाईते भएका छन् । कुटपिटबाट पोखरा ८ सिर्जनाचोक बस्ने १७ बर्षिय शिव कार्की र पोखरा ५ पस्र्याङ बस्ने सौगात क्षेत्री घाईते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि..
पिएन क्याम्पस देशकै उत्कृष्ट, २ लाख ५० हजार पुरस्कार पायो २६ भाद्र २०७५, मंगलवार ०२:०७
पोखरा, भदौ २६ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस देशकै उत्कृष्ट घोषित भएको छ । देशभरीका सरकारी क्यम्पसमध्ये पिएन क्याम्पस उत्कृष्ट हुँदै नगद २ लाख ५० हजार सहित सम्मानित भएको छ । ३९ औं शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले..
नेपालमै अब्बल पोखरेली स्कुल ! २१ भाद्र २०७५, बिहीबार ०२:०२
प्रकाश ढकाल पोखरा, भदौ २१ । पोखराको मदरल्याण्ड स्कुल २०७३ सालमा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा संस्थागततर्फ पहिलो विद्यालय भएको थियो । १ लाख नगदसहित शिल्ड र प्रमाणपत्र जितेको मदरल्याण्ड यस बर्ष नेपालमै उत्कृष्ट ठहरियो । विद्यालय छनौट समितिले..
पोखराका ३ स्कुल नेपालमै उत्कृष्ट, सरकारले पुरस्कृत गर्ने (कुनकुन परे ?) २० भाद्र २०७५, बुधबार ०८:५०
पोखरा, भदौ २० । पोखराका तीनवटा विद्यालय नेपालमै पहिलो उत्कृष्ट भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३९ औँ शिक्षा दिवस तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट विद्यालयलाई प्रदान गरिने पुरस्कार घोषणा गरिएको छ..
पोखरा विश्वविद्यालयबाट नेविसंघका ४ नेता पक्राउ १७ भाद्र २०७५, आईतवार १४:०२
पोखरा, भदौ १७ । पोखरा विश्वविद्यालयमा केही दिनअघि भएको कम्प्युटर ह्याक र डाटा चोरीको घटनामा क्याम्पस प्रशासनलाई सचेत गराउन पुगेका नेविसंघका ४ नेताहरु पक्राउ परेका छन् । डाँडाको नाक प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा..
जनप्रिय क्याम्पसमा अनेरास्ववियूको तालाबन्दी १६ भाद्र २०७५, शनिबार ०२:१०
पोखरा, भदौ १६ । पोखराको जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसमा नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका छन् । पढ्ने समयमा फिल्मको प्रचार गरेको भन्दै उनीहरुले क्याम्पस प्रमुख विरञ्जी गौतमको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् । स्वतन्त्र..
मोवाईल चोरेको आरोपमा मुस्ताङमा तीन शिक्षकले विद्यार्थी कुटे १२ भाद्र २०७५, मंगलवार ०८:२९
मुस्ताङ, भदौ १२ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ कोवाङमा रहेको जनआदर्श माविकी एक विद्यार्थीलाई शिक्षकहरुले कुटपिट गरेका छन् । मोवाईल चोरीको आरोपमा ९ कक्षामा पढ्ने १४ बर्षिया मधु परियारमाथी तीनजना शिक्षकहरुले कुटपिट गरेका हुन् ।..
पोखरा विश्वविद्यालयमा स्ववियुको विरोध, आन्दोलनप्रति नेविसंघको आपत्ति ११ भाद्र २०७५, सोमबार १६:२९
पोखरा, भदौ ११ । पोखरा विश्वविद्यालयमा केही दिनअघि भएको घटनालाई लिएर स्ववियु पोखरा विश्वविद्यालयले विरोध जनाएको छ । सोमबार ¥यालि निकालेर घटनामा दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ । तर स्ववियुमा पनि अनेरास्ववियुले एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै..